စစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း တက်ရောက်ရမယ့် Lee Min Ho! - MoviesFan
စစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း တက်ရောက်ရမယ့် Lee Min Ho!
F4 မင်းသားလို့လူသိများတဲ့ Lee Min Ho ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ခုနှစ် မေလ၁၇ရက်နေ့မှာ ပြည်သူ့အကျိုးပြလုပ်ငန်းတွေကို ၁၀လကြာ လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး ခုချိန်မှာတော့ စစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကို ၄ပတ်အကြာ တက်ရောက်ရန်အတွက်အမိန့်ချမှတ်ခြင်းခံလိုက်ရတာမို့ မတ်လ၁၅ရက်နေ့မှာ Choongnom Nonsam လေ့ကျင့်ရေးစင်တာကို စစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းတက်ရောက်ရန်အတွက် သွားရောက်ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Company မှ ပွဲစားအချို့က Lee Min Ho ရဲ့ Fan တွေဆီကနေပြီး Lee Min Ho စစ်တပ်ထဲဝင်တဲ့အခါမှာ သူ့ရဲ့ဘေးကနေလိုက်ပါပို့ဆောင်အားပေးနိုင်ဖို့အတွက် ဝန်ဆောင်ခတွေတောင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ ပွဲစားတွေဟာ Fan တွေဆီကနေပြီး လူတစ်ယောက်စာကို ကိုရီးယားဝမ်၅သိန်း ဒေါ်လာ ၄၇၀ခန့်၊ လူနှစ်ယောက်စာကိုတော့ ဝမ်၆သိန်း ဒေါ်လာ၅၆၀ခန့်၊ လူလေးယောက်စာကိုတော့ ဝမ်၇သိန်း ဒေါ်လာ၆၆၀ခန့် ဆိုပြီး သတ်မှတ်ကာကောက်ခံတောင်းယူနေတယ်လို့လည်းသိရှိခဲ့ရပါတယ်။
အဲ့ဒီထဲကမှ fan တစ်ယောက်ကို Lee Min Ho ရဲ့ မိသားစုအနေနဲ့ သူ့မိဘတွေနဲ့ကပ်ပြီးလိုက်ပို့ခွင့်ရစေရမယ်လို့တောင် အာမခံထားတာမျိုးတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒီ Company ရဲ့လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေကတော့ ကိုရီးယား နဲ့ တရုတ်မှာရှိတဲ့ အနုပညာရှင်တွေရဲ့ Fan တွေကို ချုပ်ကိုင်နေတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပဲလို့ဆိုလာပါတယ်။ Lee Min Ho ရဲ့ Agency ဘက်ကလည်း “ဒီကိစ္စက Lee Min Ho ရဲ့နာမည်ဂုဏ်သိက္ခာကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက်တာမဟုတ်ပေမယ့်လည်း သူ့ရဲ့ နာမည်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းစေတယ်လို့ယူဆရတာမို့ တစ်စုံတစ်ခုပြန်လည်တုံ့ပြန်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ ခုလို နာမည်ကြီးမင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်တယ်ဆိုတာ တကယ်တော့အမှုကြီးကြီးကိုရင်ဆိုင်ဖို့လမ်းစတစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
မင်းသား Lee Min Ho က သူ့ရဲ့ ၄ပတ်ကြာ လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းပြီးဆုံးတဲ့အခါမှာ သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို ဆက်လက်ပြီးလုပ်ဆောင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Lee Min Ho ရဲ့ Fan တွေကတော့ ၄ပတ်လောက် Idol ကြီးကိုလွမ်းနေရတော့မှာပဲနော်……
Korea, military service
Previous Post: ရူပဗေဒလောကရဲ့ ကြယ်တစ်ပွင့် Stephen Hawking: အသက် ၇၆ နှစ်အရွယ်မှာကြွေလွင့်
Next Post: “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” ရဲ့ ပထမဆုံး Trailer ထွက်ပြီ